AdTruth: Nghọta ndị na-ege ntị na Mobile Mobile | Martech Zone
AdTruth dị na ngwanrọ nke na-enye ndị ahịa ohere ịmata ndị ọrụ gafere websaịtị ngwa na ngwa. AdTruth na teknụzụ gị dị ugbu a na-arụ ọrụ iji chọpụta, lekwasịrị anya na soro ndị ọrụ ka ị na-akwado ihe nzuzo na nhọrọ ndị ahịa.
Imirikiti teknụzụ njirimara njirimara chọrọ nbanye iji mata onye ahụ na / ma ọ bụ kuki iji soro ha. Nsogbu dị na kuki bụ na a na-ehichapụ ha na ha anaghị adịgide adịgide. AdTruth jiri njirimara nke na-adịgide adịgide - ọ bụghị kuki - nke ahụ anaghị akwanyere ntọala na ihe nchọgharị anya. Ha na-akpọ nke a Smart Ngwaọrụ Identification.
Icheta na imeghari nke ekwentị mkpanaka ziri ezi ma na-eme na ezigbo oge, na-enye ohere ka onye mgbasa ozi ma ọ bụ ndị mbipụta wepụta ohere ọrịre maka ọrịre, mbugharị, ma ọ bụ nhaghachi azụ. D ka amata ngwaọrụ nke ọ bụla, ndị mgbasa ozi nwere ike ijikọta ID ngwaọrụ yana data ndị ahịa iji zụlite profaịlụ ndị na-ege ntị.
Tags: chukwunonsommataSmart Ngwaọrụ Identificationlekwasịrịtracknjirimara njirimara